दुर्गममा उद्धार गर्नुपर्ने ‘केस’ नै भेटेनन् ‘एयर एम्वुलेन्स’ले | Nepali Health
२०७२ पुष १ गते ८:५८ मा प्रकाशित
नेपालमा सुत्केरी हुँदा वा सुत्केरीपछि अत्यधिक रक्तश्राव भएर वार्षिक करिब एक हजार आमाहरूले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । समयमै उद्धार र उपचार हुन नसकेर मुलुकका दुर्गम भेगमा सुत्केरीको मृत्यु भएका खबर आउने क्रम जारी छ । तर, दुर्गमका एयर एम्बुलेन्सले उद्धार गर्नुपर्ने ‘केस’ नै भेटेका छैनन् ।
उद्धार गर्नुपर्ने ‘केस’ नपाउँदा एयर एम्बुलेन्सका लागि छुट्याएको न्यून बजेटसमेत फ्रिज हुने गरेको छ । सरकारले दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरूमा सुत्केरीका वेला आउन सक्ने जटिल अवस्थाका वेला तत्काल ‘रेस्क्यु’ गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुर्‍याउन हेलिकोप्टर तथा हवाईजहाज भाडामा लिई ‘एयर एम्बुलेन्स’ सेवा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २५ लाख रुपैयाँ पूरै फ्रिज, २०७१/७२ मा ३० लाख रुपैयाँ छुट्याएकोमध्ये आधा फ्रिज र चालू आवका लागि छुट्याएको ४० लाख रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म खर्च नहुनुले एयर एम्बुलेन्सले जटिल ‘केस’ नपाएको स्पष्ट हुन्छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले दुर्गमका सुत्केरीमध्ये १५ प्रतिशत ‘केस’ जटिल हुने र रिफर गर्नैपर्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार स्वास्थ्य महाशाखाअन्तर्गतको यो कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले पछिल्लो तीन वर्षमा ९५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यो बजेटले पाँच विकास क्षेत्रमा वार्षिक पाँचजनाको दरले कुल १५ वटा जटिल ‘केस रेस्क्यु’ गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, अहिलेसम्म ‘रेस्क्यु केस’ को संख्या तीनवटा मात्रै पुगेको छ ।
महाशाखाकी निर्देशक डा. पुष्पा चौधरीले दुर्गमका जटिल ‘केस’ आएसम्म ‘रेस्क्यु’ गर्ने गरेको भन्दै ‘केस’ नै नआउनु झन् राम्रो भएको बताइन् । तर, स्वास्थ्यका अधिकारीहरू नै ‘केस’ सम्बन्धित ठाउँमा नपुग्दै सुत्केरीको ज्यान जाने गरेको बताउँछन् । ‘डोल्पाको सालदाङ गाविस बैतडी जिल्लाभन्दा ठूलो छ । डोल्पा पूरै महाकाली अञ्चलभन्दा ठूलो छ । गाविसमा रहेको स्वास्थ्यचौकी पुग्न वडाबासीलाई चार–पाँच दिन लाग्छ । ती मानिसले जटिल ‘केस’ भयो भने कहिले सदरमुकाम पुर्‍याउने ? सदरमुकामले कहिले बाहिरका लागि रिफर गर्ने ? क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयलाई कसरी समन्वय गर्ने ? कहिले सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुर्‍याउने ?’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले भने ।उनले समयमै खबर आए पनि कहिलेकाहीँ मौसमको गडबडीले हेलिकोप्टर पुग्न नसक्ने समस्या भएको बताए ।
तीन वर्षमा तीनवटा मात्र ‘केस’
पाँच विकास क्षेत्रमा वार्षिक पाँचजनाको दरले कुल १५ वटा जटिल ‘केस रेस्क्यु’ गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, अहिलेसम्म ‘रेस्क्यु केस’को संख्या तीनवटा मात्रै पुगेको स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार स्वास्थ्य महाशाखाकी निर्देशक डा. पुष्पा चौधरीले बताइन् ।
दुर्गमका एयर एम्बुलेन्सले उद्धार गर्नुपर्ने ‘केस’ नै नभेटेपछि सरकारले छुट्याएको न्यून बजेटसमेत फ्रिज हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा २५ लाख र ०७१/७२ मा १५ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । चालू आवका लागि छुट्याएको ४० लाखमध्ये अहिलेसम्म सबै रकम बाँकी छ । तीन वर्षमा सरकारले ९५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
हेलिकोप्टर जति सबै काठमाडौंमै
सरकारले दुर्गम क्षेत्रका सुत्केरीका लागि एयर एम्बुलेन्सका रूपमा पठाउने हेलिकोप्टरजति सबै काठमाडौंमै रहने गरेका छन् । सुत्केरीका वेला जटिल अवस्था उत्पन्न भए तत्काल ‘रेस्क्यु’ गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुर्‍याउन हेलिकोप्टर तथा हवाईजहाज भाडामा लिई ‘एयर एम्बुलेन्स’ सेवा दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, काठमाडौंबाट हेलिकोप्टर मगाउँदा मगाउँदै कहिलेकाहीँ सुत्केरीको मृत्यु हुने गरेको छ भने कतिपय अवस्थामा मौसमले साथ नदिने गरेको छ ।
औषधि निरीक्षणका लागि चार महिनाको अवधी शून्य प्रगति